नेकपामा तीन नेताको ‘लभ-हेट ट्राएंगल’ :: मनोज सत्याल :: Setopati
नेकपामा तीन नेताको ‘लभ-हेट ट्राएंगल’
मनोज सत्याल काठमाडौं, जेठ १७
प्रचण्ड जवाफ दिए- हो, साँचो हो। सहमति नभएको भए पार्टी एकता कसरी सम्भव हुन्थ्यो।
साढे दुई वर्षपछि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नु हुन्न भन्ने कल्पना गर्न चाहन्नँ : प्रचण्ड
अर्कोतर्फ माधव नेपाल सकेसम्म पार्टीको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको हातमा नजाओस् भन्ने चाहन्छन्। उनी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिए पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सुम्पन तयार छैनन्। गत निर्वाचनमा पाएको मतको हिसाब अनुसार पूर्वएमालेले ७२ र पूर्वमाओवादीले २८ प्रतिशत मत ल्याएकाले पनि पार्टी नेतृत्व छाड्न नहुने मत एमालेका नेता/कार्यकर्तामा छ। कार्यकर्ताको यो धारलाई माधव नेपालले नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्।
‘एकताले पूर्ण आकार लिएपछि समिकरण बन्नु स्वभाविक हो। केपी ओली - माधव नेपाल, प्रचण्ड र माधव नेपाल वा प्रचण्ड र केपी ओलीबीचमा पनि समिकरण बन्न सक्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा गएपछि रामबहादुर थापा बादल, माधव नेपालसँग मिल्न सक्छन् वा नारायणकाजी र ईश्वर पोखरेल उता समूहमा नअटेर आउँछन् कि! यो सबै भनेको महाधिवेशनमा पुगेपछि टुङ्गो लाग्ने कुरा हो।’
‘दुई जनाले सहमतिमा गर्ने निर्णय सिङ्गै पार्टीले मान्दै आएको छ,’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजोका कपाली तमसुकको आधारमा एकीकृत पार्टीले असान्दर्भिक र औचित्यहीन छलफल र निर्णय त शायदै गर्छ होला! किनभने, सत्यनारायणको पूजा भइरहेको बेला त्यही घरमा शोकको शंख फुकिनु शोभनीय मानिदैन! अस्थिरता निम्त्याउने गरी सार्वजनिक खपतका लागि बोलिनु असामयिक अभिव्यक्तिमात्रै हो।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०७६, ११:३४:००